Ike Owuwu - AfricaArXiv
By Johanssen Obanda, 4 izu 4 izu gara aga
By Johanssen Obanda, 2 ọnwa 1 ọnwa gara aga
By Sam Dupont, 3 ọnwa 3 ọnwa gara aga
TCC Africa & AfricaArXiv meriri na egwuregwu ASAPbio
N'okpuru isiokwu Engba Mgba Obi Nkwado na Nyocha, ASAPbio nwere akara mpempe akwụkwọ iji mee ka mgbasawanye maka echiche ọhụrụ na nke dị ugbu a maka ịgba ume nhazi usoro na nyocha. Emere ihe omume a na mmekorita ya na Wellcome, Chan Zuckerberg Initiative, Howard Hughes Medical Institute, DORA, EMBO Press, PLOS, na eLife. GỤKWUO…
By TCC Africa & AfrikaArXiv, 7 ọnwa 4 ọnwa gara aga
AfricaArXiv na akwado COAR na ntinye ha na “Data Repository Selection: Criteria Matter”
Na 24th nke November, 2020 Confederation of Open Access Repositories (COAR) bipụtara nzaghachi na Nchịkọta Nhọrọ Data repository, na-ekerịta nchegbu ha na ihe kpatara njirisi ndị a ga-abụ ihe ịma aka nye ụfọdụ ndị nyocha na ebe nchekwa. Ndị nnọchi anya sitere na akwụkwọ akụkọ, ndị mbipụta akwụkwọ na ụlọ ọrụ nkwukọrịta ndị ọkà mmụta, FAIRsharing Community gbakọtara GỤKWUO…
By AfricaArXiv, 7 ọnwa 4 ọnwa gara aga
AfricArXiv na onye otu COS iji kwado nyocha pan-Africa
N'ebe ọrụ ntinye akwụkwọ na-emeghe emeghe maka obodo ya, AfricaArXiv ga-enyekwu ohere maka omume ndị siri ike ma na-emegharị.
By AfricaArXiv, 8 ọnwa 4 ọnwa gara aga
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwukọrịta amalitela ịnye nkuzi na ntanetị. Nwaanyị Joy Owango, onye isi oche kwuru na nke a bụ akụkụ nke atụmatụ anyị maka 2019/2020, nke anyị nyefere n'okpuru onyinye Invest2Impact wee merie. Na agbanyeghị nke a, anyị nwere obi anụrị maka ihe ndị a ma anyị na-atụ anya ịkwado ọtụtụ ndị nyocha na ndị ọkachamara banyere otu anyị nwere ike isi melite nyocha ha GỤKWUO…
By TCC Africa, 1 afọ 4 ọnwa gara aga